Nkebi nke 1: Olee otú iji YouTube on Samsung TV
Nkebi nke 2: Olee otú ibudata YouTube video ka Samsung TV
Nkebi nke 3: Olee otú ibudata YouTube video on Samsung igwe
Samsung TV, dị ka ndị ọzọ Samsung ngwaọrụ bụ ihe nlereanya magburu onwe nke ngwaike na software mma. The franchise akanyam ọtụtụ nde nkeji niile gburugburu ụwa na nwere ihe ike onye ọrụ isi. Isiokwu a na-elekwasị anya na ụfọdụ Atụmatụ na usoro nke ga-abịa kemfe na-eji YouTube on Samsung igwe na Samsung TV. Nọdụ ala azụ, jidere a kọfị na-agụ na ka isiokwu a nwere ike ịbụ ogologo, ma ga-aba uru ka ihe niile Samsung ọrụ na n'ikpeazụ.
Iji jiri YouTube on Samsun TV, ị mkpa mezue Debanye aha usoro. N'ihi na nke a, na-eso ndị a:
1. Gaa YouTube ngwa na gị Samsung TV na ịnyagharịa ụzọ gị ihe ịrịba ama na ihuenyo. Anọ na a na ihuenyo ruo mgbe ihe ndị ọzọ nzọụkwụ.
2. Gaa youtube.com si gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Rụọ ọrụ YouTube si gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
3. Wet ke gị ID na paswọọdụ mgbe rịọrọ. Jiri Google ID na ị na-eji YouTube na.
4. Ozugbo ị na na na, i nwere ike-ọkọnọ na ndepụta Google identities metụtara akaụntụ gị. Ndepụta a na-agụnye:
a. Gị Google+ profaịlụ aha ma ọ bụ adreesị email gị.
b. Ọ bụla Google+ peeji nke jisiri site na akaụntụ gị. Họrọ a Google+ peeji e jikọrọ ya na a YouTube ọwa ma ị ga-enwe ike banye.
5. Mgbe ị họrọ otu akaụntụ, tinye ebighị koodu gosiri na YouTube ngwa gị Samsung TV.
6. Pịa ekwe ka ohere na-eche maka nkwenye ihuenyo na ngwa. Ozugbo ihuenyo egosi, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ YouTube si gị Samsung smart TV.
Ka ibudata YouTube videos gị Samsung TV, ị ga-mkpa ka ojiji nke ọ bụla ọzọ software nke ga-ekwe ka ị na ibudata vidiyo si na YouTube. Isiokwu a na-eme ka ojiji nke Wondershare AllMyTube software na-vidiyo si na YouTube ebudatara na ala. Wondershare AllMyTube Bụ a ngwa ngwa ngwọta nke YouTube video nbudata nsogbu na ọ bụghị nanị na-akwado YouTube Ma ọtụtụ puku ndị ọzọ video hosting weebụsaịtị ka Vimeo. Na Wondershare AllMyTube, nbudata vidiyo si na ọ fọrọ nke nta na saịtị ọ bụla n'elu internet dị mfe na nsogbu free.
Nzọụkwụ 1. Iji Wondershare AllMyTube ibudata YouTube video na kọmputa
1. Download na wụnye Wondershare AllMyTube gị na kọmputa na iji nyere njikọ. Mgbe nwụnye zuru ezu, ẹkedori Wondershare AllMyTube.
2. Ị ga-enwe abụọ nhọrọ ibudata vidiyo si na YouTube gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
a. Ị nwere ike ozugbo Tapawa njikọ nke YouTube video na ị chọrọ download n'ime interface nke Wondershare AllMyTube.
b. Alternatively, i nwere ike imeghe nchọgharị gị na-aga YouTube, ụdị na aha nke video na ị chọrọ ibudata na pịa na "Download" button na-egosi na n'elu nri akuku nke ihuenyo.
3. Iji ma nke ụzọ kọwara na nzọụkwụ 2, ị nwere ike ibudata dị ka ọtụtụ YouTube videos gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa dị ka ị chọrọ.
Nzọụkwụ 2. Nyefee vidiyo si na kọmputa na-Samsung TV
Ugbu a niile i nwere ime bụ transfer vidiyo si na gị na laptọọpụ gị Samsung TV. N'ihi na nke a ị pụrụ ime ka ojiji nke ihe HDMI USB ka ịgbakwunye ngwaọrụ abụọ. Mgbe ahụ nanị idetuo Tapawa videos site na kọmputa na Samsung TV. Ozugbo nyefe zuru ezu, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọkacha mmasị gị YouTube videos na gị Samsung TV.
YouTube adịghị ekwe ka ọrụ ibudata videos site na saịtị ha color nke nwere ike ịbụ na-eweta nsogbu n'ihi na ọrụ na-amasị-ha music collection na ha mgbe niile. N'ihi na ihe niile dị otú ahụ ọrụ, anyị ga na-egosi a ụzọ ibudata vidiyo si na YouTube ha Samsung smartphones. Iji malite nbudata YouTube videos gị Samsung smartphones, na-eso ndị dị mfe nzọụkwụ:
1. Download TubeMate ngwa ma ị laptọọpụ ma ọ bụ gị na kọmputa. TubeMate bụ a free ngwa na-arụ ọrụ na YouTube ngwa ikwe ọrụ ibudata ọ bụla YouTube video ha Samsung smartphones ozugbo. TubeMate bụ adịghị na Google Play Store otú eso njikọ nyere ibudata ngwa si ​​ukara website.Download si ebe a.
2. Ọ bụrụ na ị ebudatara ngwa gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa mbụ, nyefee ya na gị Samsung smartphone site n'ọnụ eriri USB. Ma, ọ bụrụ na ngwa bụ na ekwentị gị ugbua, ibugharịa na kwụpụ 3.
3. Kpatụ na ngwa site na ekwentị gị na-amalite echichi. Nye ọ bụla ikikere na ngwa nwere ike ịchọ arụ ọrụ nke ọma na see button akara "Wụnye"; na-eche maka echichi mezue.
4. Ẹkedori ke TubeMate ngwa si gị Samsung smartphone ma chọọ gị chọrọ YouTube video site na-eme ojiji nke etokwa iko na n'elu nri akuku nke ihuenyo nri na-esote search mmanya.
5. Ozugbo ị chọtara video na ị na-achọ, pịa green akụ na-egosi na ala n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo na-amalite nbudata na video gị Samsung ama n'otu ntabi anya.
Olee otú Play WMA on Samsung Galaxy Series (Galaxy S4, S3, S2, S gụnyere)
Olee otú Naghachi Ozi si Galaxy Ukwu
> Resource> Samsung> 3 Atụmatụ na YouTube Iji na Samsung ekwentị mkpanaaka na Samsung TV